I-TreeTops SUITE Joondalup*Peace Quiet Tranquility*
I-SUITE iyizinga eliphezulu lonke, indlu ebhekene ne-National Park. Ihlanganisa igumbi lokulala elikhulu, i-ensuite / igumbi lokugezela elihlanganisa nokugeza. Igumbi lokuhlala kanye ne-balcony yangasese. Igumbi lokuhlala elinendawo yokudlela kanye nokwenza ikhofi elihlangene kanye nezinsiza zokwenza itiye. Izivakashi zinokufinyelela kwazo okunokhiye wokhiye emnyango ongaphambili. Indawo AKUKHO OKUGWAYO. Kukhona i-WiFi ne-Netflix etholakalayo ukuze izivakashi zizisebenzise kuthebhulethi yazo. Mina nenja sinendawo yangasese ehlukene phansi.
Igumbi lokulala elikhulu ne-ensuite etholakala phezulu. Ngokufinyelela kuvulandi ngokubukwa kweNational Park. Igumbi lokugezela elinebhavu, ishawa kanye nesitsha sezandla kanye nendlu yangasese ehlukene. Izinto zokugeza zinikezwa (ukugeza umzimba, i-shampoo kanye ne-conditioner).
Isikhala siyimfihlo futhi siyakwazi ukungena ngokukhiya ukhiye emnyango wangaphambili. Indawo yokupaka engaphandle komgwaqo iyatholakala ngemvume yokupaka (idiphozithi $20.00)
Igumbi Lokuphumula Elihlukile elinendawo yokudlela kanye nendawo yokwenza ikhofi ehlangene kanye nokufinyelela kuvulandi konke kusezingeni elilodwa elizosetshenziswa nguwe.
Izakhiwo zokwenza ikhofi netiye zifakiwe.
I-Joondalup inezindawo eziningi zokudlela ezitholakalayo zokudla.
Yonke impahla AKUKHO OKUGWAYO.
Ikhishi nelondolo nezindawo zami engihlala kuzo ziyimfihlo futhi azitholakali kubavakashi.
Ngaphakathi kwebanga lokuhamba ukuya ECU, Joondalup Hospital kanye ne-Education Precinct.
Indawo yokuhlala itholakala kahle enhliziyweni yeJoondalup, imizuzu engama-25 enyakatho yePerth City. Noma ngabe uya emsebenzini noma ukungcebeleka, uzokujabulela ukuba nolwandle, indawo yezitolo esezingeni lomhlaba kanye nezithuthi zomphakathi emnyango wakho. Indawo yethu eyinhloko yenza kube lula ukufinyelela ezindaweni ezikhangayo ezinkulu ukuze uhlale, uphumule futhi ujabulele iholide lakho. Indawo yokuhlala iphakathi kwamakhefi, izindawo zokudlela, imigoqo ephilayo, ipaki kazwelonke, izindawo zezemidlalo, amakilasi egalofu, amasinema, izindawo zokudlala zezingane nezimakethe.
Idolobha laseJoondalup liyikhaya lezinto eziningi ezithokozisayo nezihehayo zasendaweni ezibophezelekile ukwenza ukuhlala kwakho endaweni yethu kube okukhumbulekayo. Ezinye izinto ezikhangayo eziphawulekayo zifaka i-Mullaloo Beach, iBurns Beach kanye ne-Ocean Reef, okuyindawo eyimizuzu eyi-10 kuphela. I-Hillary's Marina idume kakhulu izivakashi kanye nabantu bendawo futhi imizuzu eyi-15 kuphela ukusuka. Kunezindawo zokudlela eziningi namakhefi, ama-nightclub, amathaveni nezitolo zokudayisa. Isikebhe esiya e-Rottness Island sihamba nsuku zonke, futhi kukhona uhambo oluqashiwe lomkhumbi nokudoba ukuze sisebenzise ithuba lohambo losuku. Okufanele ubone i-poplar 'AQWA', indawo ethandwa kakhulu ngaphansi kwamanzi lapho ungahamba khona emanzini emhubheni wengilazi.
Ngilapha ngenxa yakho ngesikhathi uhlala, kodwa izinga lethu lokusebenzisana likuwe. Uma udinga okuthile xhumana ne-imeyili ye-Airbnb. Uzokwazi ukuzihlolela wena lapho ufika.